Ibsa Tarkaanfii Waraanaa ABO - Adda Bilisummaa Oromoo | Adda Bilisummaa Oromoo
Home » Oduu » Tarkaanfii WBO » Ibsa Tarkaanfii Waraanaa ABO
By admin on October 19, 2016.
Humni Mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn hoogganamutti dabalame ummata waliin ta’uudhaan waraana qubattuu wayyaanee ummata Oromoo shororkeessaa jiru irratti tarkaanfii fudhataa jiru jabeessee itti fufuun, Onkoloolessa 17,2016 Shawaa Bahaa akkasumas Kibba baha Oromiyaa fi Humni Addaa WBO Shawaa Kaabaa keessatti haleellaa geggeessaniin agaazii fi poolisoota federaalaa 21 ol hojiin ala godhan; meeshaa waraanaas diina irraa booji’an.
Haaluma kanaan Onkoloolessa 17,2016 Godina Baha Shawaa kellaa irraa km 2 kan hin caalle Awaashitti humna agaazii fi poolisa federaalaa namoota karaa deeman kellaa osoo hin geenye karaatti qabanii hiraarsan haleeluun 7 irraa ajjeesee, 4 ol madeesse. Loltoota wayyaanee du’an keessaa 3 poolisoota federaalaa oggaa ta’an, kanneen hafan agaazota. Lola kana irratti humni mooraa QBO ABOtti dabalame kilaashii 11 fi mi’oota adda addaa diina irraa dhuunfatuun qabeenya qabsoo taasisee jira. Akkasuma Falmaa taasifamaa jiruun Kokosaatti loltootni agaazii 4 ajjeefamanii jiran. Kana malee bakkoota adda addaatti ajajoota waraanaa ummata rakkisaa jiran irratti tarkaanfii fudhatame bal’ina isaa akkuma nu gaheen ibsina.
Arsii Gadabasaasaa, Kofalee, Adaabbaa fi kanneen biroo, akkasumas Booranaa fi Gujii keessatti shiftootni waraanni wayyaanee/TPLF ummata meesha maleeyyii irratti dhukkaasa geggeessaa kan jiran oggaa ta’u, addatti Arsii keessatti ummatnii fi qabsaawotni guutummaatti waraana keessa jiran.
Guyyuma kana konkolaataan wayyaanee tokko Wandoo Gannat irraa gara Shaashamannee deemaa turte irratti tarkaanfii fudhatuun hojiin ala godhee jira.
Gama biraan Humni Addaa WBO fi ummatni walta’uudhaan tarkaanfilee adda addaa fudhataa jiran itti fufuun, guyyuma kana Onkoloolessa 17,2016 Kaaba Shaggar Onoota Kuyyuu fi Warra Jaarsoo keessaa hidhattoota diinaa warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa FXG dura akka dhaabbataniif hidhachiifaman irraa qawwee 9 hiikuun dantaa qabsoo Oromoof oolchan. Lukkeewwan diinaa kanneen meeshaan irraa hiikkatame Haayluu Boggaalaa, Rattaa Baalchaa, Dhugumaa Masfinii fi Kabbadaa Xaafaa kanneen jedhaman keessatti argamu.
WBOn Zoonii Kibbaa Onkoloolessa 16, 2016 haleellaa fudhateen kanneen konkolaataan ittiin galagaluun du’anii fi madaa’an dabalatee loltoota wayyaanee 55 ol du’aa fi madoo taasisuun isaa ni yaadatama.
Ummatni Oromoo hidhaa fi ajjechaa sadarkaa duguuggaa sanyiitti tarkaanfate mootummaan wayyaanee isa irraan gahaa jiruuf osoo hin jilbeenfanne, akkuma wareegama olaanaadhaan murtii master plaanii Finfinnee dhaabsisee fi haqsiise, ammas labsii yeroo hatattamaa wayyaaneen labsatuun isa fixuuf hojjetaa jiru kana fashalsuuf, mirgaa fi bilisummaa isaa gonfatuuf Warraaqsa Biyyaalessaa FXG jalqabe daran jabeessuun akka itti fufu ABOn gadi jabeessee yaamicha dabarsa.
Mootummaan Wayyaanee kasaaraa irra gahe itti dabalata ABO-Qeerroo fi ummatni waraana waliin wal tumsuu hubatuun waraana dhuunfatuuf jecha ummata mataa gadi qabachiisuuf labsii hatattamaa kana baasuun hubatame. Waan taheef, ummatni keenya diddaa isaa bifa adda addaa kan FXG galiin gahuuf sochii jalqabe akka jabeessee itti fufu ABO jabeessee hubadhiisa. Kanuma waliin ABOn bifa adda addaan labsii kana laamshessuuf kan jabaatee hojjataa jiru tahuu ibsa.
Mootummaan wayyaanee qarqara dhabamaa irra jiru yeroo ammaa kana qabsoo bilisummaa Oromoo isa muddee jiru gara dabarsuuf, biyya keessaa fi alatti karaa tikoota isaa fi farreeniin TV fi karaa medialee hawaasaan duula ololaa QBO fi ABO irratti geggeessaa jira. Ummatni keenya kan keessaa fi alaa olola wayyaanee fi farreeniif osoo gurra hin ergisne, akkuma duraa waan danda’uun ABO/WBO, qabsaawota isaa fi ummata keenya biyya keessaa falmaa hadhaawaatti jiru jabeessuu fi cina dhaabbatuu irratti akka hojjetu ABOn gadi jabeessee dhaamaaf.